japanSamachar | Education/Technology | जापान आउने तयारीमा रहेका विद्यार्थी प्रवेशको ताजा अवस्था यस्तो छ
(Japan) 25 th September | 2020 | Friday | 1:11:05 PM || (Nepal) 9:56:05 AM
जापान आउने तयारीमा रहेका विद्यार्थी प्रवेशको ताजा अवस्था यस्तो छ
POSTED ON : Wednesday, 09 September, 2020 | Views : 16160
जापानमा जापानी भाषा विद्यालयका विद्यार्थीहरुको प्रवेशको विषयमा तपाइहरुको मनमा अनेक प्रश्न हुन सक्छ ।
भाषा विद्यालयका प्रतिनिधिहरुको समूहले जापानी भाषा विद्यार्थीलाई सहायता र जापानमा उनीहरुको प्रवेशको विषयमा सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छन् ।
आज हामीले अगष्ट २५ मा यिनी प्रतिनिधि मध्ये एक टोकियोको आकिहाबारामा रहेको इन्टरकल्चरल इन्ष्टिच्यूट अफ जापानका प्रध्यानाध्यापक कातो सानाएसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद दिएका छौं ।
प्रश्नः भाषा विद्यार्थीहरुलाई अक्टोबरमा जापान आउने अनुमति दिन सरकारलाई दबाब दिनका लागि विद्यालयहरुले के गरिरहेका छन् ?
उत्तरः जापान भर रहेको करीब ८०० जापानी भाषा विद्यालयहरुले साथमा मिलेर ६ ओटा समूह बनाएका छन् । यिनीहरुले न्याय मन्त्रालय, विदेश मामिला मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग वार्ता गरिरहेका छन् । हामीहरुले यी निकायहरुसँग कुरा गरेर विदेशी विद्यार्थीहरुलाई चाँडै नै जापान आउने अनुमति दिलाउन प्रयास गरिरहेका छौं ।
प्रश्नः अक्टोबरदेखि शुरु हुने शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई हाजिर हुन सरकारलाई प्रेरित गर्न विद्यार्थीहरुले के गर्न सक्छन् ?
उत्तरः ‘म पनि जापान जान चाहन्छु ।’, ‘जापान गएर पढ्यो भने मेरो भविष्य परिवर्तन हुन्छ ।’ भन्ने जस्ता सोच कयौं विद्यार्थीमा हुन सक्छ । विद्यार्थीहरुले यस्तो भावना ट्विटर वा अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा लेखे भने हामीहरुले यी पोष्टहरुलाई सरकारसामु देखाउन सक्छौं । त्यसैले सबैले आफ्नो आवाज उठाउनुहोस् र अरुलाई सुनाउनुहोस् ।
प्रश्नः विद्यार्थीहरुलाई जापान प्रवेशको अनुमति कहिले दिइन्छ भन्ने कुरा विद्यालयहरुलाई थाहा छ त ?
उत्तरः ममलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन । म स्पष्ट रुपमा यसको मिति भन्न सक्दिन । तर हामीहरुले साँच्चै नै सरकारलाई दबाब दिन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ कि विस्तारै स्थिति सहज बन्दै गइरहेकोले चाँडै नै प्रवेशको अनुमति दिइन्छ होला ।
प्रश्नः विद्यार्थीहरुको लागि क्वारेन्टाइन प्रक्रियाहरु के के छन् ? जस्तै एक्लै बसोबास गरिरहेकाहरु सुपरमार्केट, कन्भेनियन्स स्टोर आदि ठाउँमा जान पाउँछन् ? १४ दिनसम्म विद्यार्थीहरु कहाँ बस्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी छन् कि ?
उत्तरः पहिलो कुरा, जापानमा आउने बित्तिकै सबै जनाले पीसीआर परीक्षण गराउनु पर्दछ । पीसीआरको नतिजा नकारात्मक आयो भने विद्यार्थीहरु उनीहरु बस्ने ठाउँमा जान सक्छन् । (यी सबै कुरा उनीहरुले विमानस्थलमा प्राप्त गर्ने फारममा लेखिएको हुन्छ । ) तर तपाईले सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोग गर्न पाउनु हुन्न । यस्तो विद्यार्थीहरुलाई आवश्यकताअनुसार विद्यालयले नै लाने र पु¥याउने सेवा दिन सक्छन् ।
सहमति जनाइएको बसोबास स्थलमा आइपुगेपछि सो विद्यार्थी त्यहाँ कम्तिमा पनि २ हप्ता बस्नु पर्छ । यस अवधिमा विद्यार्थीको विद्यालयले सम्भव भएसम्म उनीहरुलाई मद्दत गर्ने कोशिश गर्दछ ।
क्वारेन्टाइनको बेलामा मास्क लगाउने, भिडभाड धेरै हुने समयमा नजाने जस्ता उपायहरु अपनाउने हो भने कन्भेनियन्स स्टोर आदिबाट पनि सामान किन्न सकिन्छ ।
प्रश्नः क्वारेन्टाइनमै राख्ने भएपनि सरकारले विद्यार्थीहरुलाई अहिले जापान प्रवेश गर्न किन दिइरहेको छैन ?
उत्तरः यो प्रश्नको उत्तर दिन अलि गाह्रो छ । किनकी यसको निर्णय सरकारले गरेको हो । कोभिड–१९ जापानमा विदेशबाट भित्रिएको हो । त्यसैले यसबारे सरकार अलि बढी नै सचेत छ । जटिल खालको अवस्थाहरुमा तत्कालै निर्णय गरि नहाल्ने देश हो जापान । स्थिति अलि साम्य होस् भनेर कुरिएको छ ।
मलाई लाग्छ कि यसको लागि अलि समय लाग्छ । तर अवस्था अन्ततः परिवर्तन हुनेछ । सरकारले विस्तारै व्यवसायी लगायतका मानिसहरुलाई प्रवेशको अनुमति दिन थालेको छ । यसपछि सरकारले प्रायोजन गरेको अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई आउन दिइनेछ । अब आफ्नै खर्चमा पढ्न आउनेहरुको पालो हो कि जस्तो मलाई लाग्छ ।
स्थिति विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ । यो सबैले देखिरहनु भएकै छ । यो कुरा तपाईहरुले पनि बुभ्mनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
प्रश्नः जस्तै मार्चमा नै भिसा पाइसकेका वा सर्टिफिकेट अफ एलिजिबिलिटी (सीओई) प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरुले पुनः आवेदन दिएर नयाँ सीओई लिनु पर्छ त ?
उत्तरः तपाईले पहिला नै सीओई लिइ सक्नु भएको छ भने यसको म्यादसहित पासपोर्टमा भिसाको स्टिकर प्राप्त गर्नु हुनेछ । यसको म्याद सकिएको छैन भने तपाईले भिसा प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । तर म्याद गुज्रिसकेको छ भने चाँहि स्थानीय जापानी दूताबासमा सम्पर्क गरेर कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सोध्न सक्नु हुन्छ ।
विद्यार्थीहरुले अक्टोबरमा जापान प्रवेश गर्न सीओई पुनः प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर विद्यालयहरुले विगत केही महीनामा पत्र जारी गरेका छन् । तपाईले यो पत्र प्राप्त गर्नु भएको छैन भने विद्यालयलाई भन्नुहोला ।
सीओई र स्पष्टीकरण पत्र लिएर दूताबासमा जानुहोस् र पासपोर्टमा नयाँ स्टिकर लगाउनुहोस् । यद्यपि, देश अनुसार यसको प्रक्रिया फरक फरक हुने भएकोले स्थानीय जापानी दूताबासमा गएर यसबारे जानकारी लिनुहोला ।
प्रश्नः सीमा अक्टोबर पछि खुल्यो भने म अप्रिल/जुलाई/अक्टोबर सीओई प्रयोग गरेर सन् २०२१ को अप्रिलसम्म जापान प्रवेश गर्न सक्छु ?
उत्तरः सीओई प्राप्त गरेका विद्यार्थीसामु यसलाई प्रयोग गर्ने समय सामान्य अवस्था भन्दा अलि लामो हुनेछ । सन् २०१९ को अक्टोबर १ देखि सन् २०२१ को जनवरी २९ भित्र जारी भएको सीओईको म्याद सामानयतः ३ महीना भएपनि प्रवेश प्रतिबन्ध हटाइएको मितिबाट ६ महीना वा सन् २०२१ को अप्रिल ३० मध्ये जुन अगाडि आउँछ त्यही सम्म थपिएको छ ।
प्रश्नः मेरो पनि आवेदन ढिला भएको छ र म जापानमा अक्टोबर÷जनवरीमा आउनेछ । के म ३ वर्षे भिसामा अध्ययन गर्न सक्छु ?
यति बेलामा हामीसँग यसको कुनै उत्तर छैन । हामीहरु पनि अवस्था कस्तो हुन्छ र विद्यार्थीहरु जापान कहिले आउँन सक्छन् भनेर कुरेर बसिरहेका छौं । यद्यपि, एक पटक यो समस्या समाधान भएपछि हामीसँग थप जानकारी हुनेछ ।